असार १० देखी विद्यालय खोल्ने मन्त्रालय आजको निर्णय – Sandesh Press
June 20, 2021 470
असार १० देखी विद्यालय खोल्ने मन्त्रालय आजको निर्णय को खबर : विद्यालय सञ्चालन गर्ने मिति तोकियो ! वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ११ गतेदेखि क्रमिकरुपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ महानगरपालिकाले असार १ गतेदेखि विद्यार्थीको उपस्थितिमै कक्षा ८ देखि १२ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै क्रमिकरुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको महानगरपालिकाको तर्क छ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले सबै सामुतथा संस्थागत विद्यालयहरुमा पत्राचार गर्दै असार १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
यो पनि:वीरगंज : बाराको सिमरास्थित हुलास स्टीलमा शनिबार अपरान्ह आ गला गी भएको छ। विद्युत सर्ट भई आ गो ला गेको प्रहरीले जनाएको छ।
बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल प्रालिमा शनिवार राति भट्टी प ड्कि एर भएको आ गला गीमा परि २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा उद्योगमा कार्यरत भारतीय नागरिक फायरम्यान र वेल्डर रहेको बारा प्रहरीले जनाएको छ।
कारखानामा वेल्डिङ गर्ने क्रममा विद्युत् सर्ट भई आ ग ला गी भएको बताईएको छ ।विद्युत् सर्ट हुँदा कारखानामा रहेको फर्नेस आयल ट्यां कर वि स्फो ट हुँदा भिषण आ गला गि भएको हो । बारा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रका अनुसार भारतको बिहार राज्य पश्चिम चम्पारणका प्रदीप गोढ र रामनाथ महतोको मृत्यु भएको छ।
आ गला गीमा परि रामकुमार विक, इन्द्र प्रसाद अधिकारी र नवराज चौलागाइ घाइते भएका छन्। मृतकको पहिचान भने खुलीसकेको छैन भने शनिबार सांझा उद्योगमा भएको आगलागी हाल नियन्त्रणमा आईसकेको प्रहरीले जानकारी गराएको हो। क्षतिको विवरण संकलन भईरहेको छ ।
Prevके तपाईको आँखा पनि बेस्सरी चिलाउने र पोल्ने गर्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
Nextके तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
विवाद पछि पहिलो पटक समिक्षा मिडियामा
शनिबारबाट माइकिङ बन्द